भानुभक्त ढकाल र सुनिल शर्मालाई एक युवाको खुलापत्र यिनीहरू कोरोना हुन, बचौं – KhabarPurwanchal
खबर पूर्वाञ्चल, २१ चैत्र २०७६, शुक्रबार २०:३१
मनोज पौडेल, मोरङ ३
नेकपा र कांग्रेसका हनुमानेहरु, केही भन्नु छ मलाई । राम्ररी सुन्नु र पढ्नू । कसलाई केको धन्दा घरज्वाइँलाई खानको धन्दाजस्तो हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र मोरङ–३ मा भने ‘कोरोना’ राजनीति गर्ने राम्रो माध्यम बनेछ, अचम्म ।
नेकपा र कांग्रेसका हनुमानजीहरु मच्चीमच्ची आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । फेसबुके राजनीतिमा एकअर्कालाई सत्तोसराप गर्ने चर्तिकला बडो गजबको देख्छु । हनुमानेहरुले भानुभक्त ढकाल र सुनिल शर्मालाई तुलना गरेर एकले अर्कालाई ‘हिरो वा भिलेन’ बनाउने उद्देश्यमा तल्लीन देख्छु । यो देखेर मलाई कुरीकुरी लागेर आयो । कोरोनाको परीक्षणका लागि खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले कमिसन खाए भन्नेबाट उछालिएको कुरा नेकपा र कांग्रेसका हनुमानहरु सार्वजनिक रुपमा नै भिड्न पुगेकाले यो भन्न बाध्य भएँ ।
यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर मन्त्री बनेका तेह्रथुमे भानुभक्त मन्त्री हुनु हाम्रा लागि खुसीको कुरा थियोे । नेकपाका शक्तिशाली नेता भएका कारण केही गर्छन् हाम्रो क्षेत्रमा भन्ने सबैको आशा थियोे । तर, कोरोनाको यस्तो महामारीको बेलामा समेत कमिसनको खेलमा लागेर भानुभक्तले आफ्नो त बदनाम गरे नै, हाम्रो क्षेत्रका समेत बदनाम गराए । हाम्रो विश्वास, भरोसा र मतको धज्जी उडाए । योभन्दा ‘घटिया र हराम’ काम अरु हुन सक्दैन । यस्तो ‘पापिस्ट’लाई जिताएर पठाउनु हाम्रो ठूलो गल्ती भयो । महामारीको बेला कमाउने धन्दामा लिप्त हुने भानुभक्त मानवता नभएको तुच्छ प्राणी रहेछन् । अब यस्तो मान्छेलाई आँखामा पट्टी बाँधेर समर्थन र रक्षामा भुक्ने नेकपा हनुमानेहरु तिमीहरुलाई कुनै शरम छैन ? एउटा भ्रष्टाचारी अनि कमिसन खोरको पक्षपोषणमा उत्रेर के सावित गर्न खोजेको हो तिमीहरूले ? नेकपालाई जे गरे पनि हुन्छस् छुट पाउनुपर्छ भन्ने हो ? अलिकति नैतिकता भन्ने चिज छ तिमीहरूसँग ?’
‘गु’लाई ‘गु’ नभनेर अपुंगो पो भन्ने ? लाज त छ छोपेर राख्नलाई ? भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन राजनीतिमा लागेका हौ तिमीहरु कि देश र जनताको सेवा गर्नलाई ? किन यस्तो नंगा नाचेको ? सरम गर सरम । उता, भानुभक्तलाई भिलेन बनाएर डा. सुनिल शर्मा (डाक्टर हो भन्नेमाचाहिं मलाई शंका छ।) लाई हिरो बनाउने कांग्रेसका हनुमानहरुको ताल झन् विचित्रको छ ।
भानुभक्तलाई जिताएर गल्ती भो रे । शर्मालाई जिताएको भए अर्कै हुन्थ्यो रे । के अर्कै हुन्थ्यो ? बताऊ त । माफिया गिरी र गुण्डागर्दीको आडमा सडकबाट उठेर अहिले नोबेल हस्पिटलका सञ्चालक बन्न भ्याएका सुनिल के कुनै चमत्कारिक व्यक्ति हुन् र अर्कै हुन्थ्यो ? कांग्रेसी हनुमानेहरु, सुनिलको विगत बुझेर पनि बुझ पचाएको कि बुझाउनुपर्ने हो ? अलिकति बुझ, डा.ज्ञानेन्द्र गिरी, नवराज पाण्डेहरुलाई (यी विचरा मनुवाहरु जिउँदै छन्, हाम्रै वरिपरि छन् ।
पूरा वास्तविकता जान्न इच्छा भए सम्पर्क गर्न सक्छौं) तत्कालीन माओवादी जनसेनामार्फत अपहरण गराइ कामिडाँडा पु¥याएर ज्यान मार्ने धम्की दिएर लुटेको होइन र त्यो नोबेल हस्पिटल सुनिलले ? नेपालको नम्बर १ मेडिकल माफियाको सूचीमा रहेको सुनिलले कसरी मुनाफाखोरी धन्दा चलाइरहेको छ त्यो पनि सबै खुलस्त पारिदिनुपर्ने हो ? थप विवरण पेश गरु कि आफैं पनि अलिकति कष्ट गरेर आफ्नो नेताको वास्तविकता के हो भनेर बुझ्न प्रयास गर्ने ?) हनुमानेहरु, सुनिलले राजनीति होइन व्यापार गरिरहेका छन्। तिमीहरूको समर्थन र आडमा उनको लुटतन्त्र चलाइरहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण, नक्कली सर्टिफिकेट, अपहरण र करछलीजस्ता थुप्रै मुद्दा विचाराधीन छ उसमाथि । अहिलेसम्म उसको भाग्य भनौं, सबै ठीकठाक चलिरहेको छ ( नेपाल हो नि त) । तर उसको चरित्र, उद्देश्य र पृष्ठभूमि कुनै शुद्ध छैन ।
कुनै वैधानिक जगमा उभिएको छैन । ऊ त झन् ठूलो स्वार्थ लिएर अघि बढेको मान्छे हो ।’ नाफा नाफा, पैसा पैसा’ उसको लक्ष्य हो । देखाउने एउटा, गर्ने अर्कै हो उसको धन्दा लेखेर राख्नु, जुनदिन उसको व्यापारमा संकट पर्छ त्योदिन उसलाई न कांग्रेस चाहिन्छ, न तिमी हनुमानेहरु नै)।
बाख्राको खोल ओढेको व्वासो हो उ। अनि कसरी सुनीलचाहिँ भानुभक्तभन्दा उत्तम हुनसक्छ हनुमानेहरु? त्यसैले म भन्छु, मोरङ क्षेत्र न.३ को लागि यी दुवैजना हितमा छैनन् ।भानुभक्त ’टुरिष्ट’थिए हाम्रोलागि।उसले आफ्नो असलियत देखाइसक्यो।उसलाई यो क्षेत्रको कुनै माया रहेनछ, न त यहाँका जनताको ।उसलाई मन्त्री हुनुथियो, भयो।आफ्नो दुनो सोझ्यायो। स्वार्थ पूरा र्गयो ।हामीप्रति उ जिम्मेवार रहेनछ। उता सुनील त झन शुद्द व्यापारी भइगयो। त्यो पनि कालो(अपराध र अवैध) पृष्ठभुमिबाट उदाएको खराब मान्छे ।
हेक्का राखौं! दुवै पार्टीका हनुमानेहरु, अन्धो भएर फेसबूकमा समय बर्बाद नगरौं । यिनीहरू दुवै हाम्रालागि भिलेन हुन भिलेन। जबर्जस्ती हिरो बनाउने कुचेष्टामा दिमागलाई सास्ती नदिउ।यी दुईटै हाम्रालागि काम लाग्ने होइनन् ।त्यसैले यी दुवैजनालाई बहिष्कार गरौं र भोलिको दिनको लागि विकल्पको खोजी गरौं । र अन्त्यमा, अहिले विश्व नै कोरोनाजस्तो प्राणघातक भाइरसबाट ग्रसित छ।नेपालमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ।सबैजना ’लकडाउन’मार्फत आफू पनि बचौ,अरुलाई पनि बाच्न सहयोग र्पुयाउनुस भनी हार्दिक अनुरोध गर्छु।नभुलौ, हाम्रो आफ्नै क्षेत्रमा राजनीतिक कोरोनारुपी भानुभक्त ढकाल र सुनील शर्मा भाइरल छन् , उनीहरुबाट बच्न पनि अपील गर्छु।नमस्कार।